Rooney oo furka ku tuuray go’aankii ay Manchester United ku…
(England) 17 Maaajo 2020. Louis van Gaal ayaa shaqada kooxda Manchester United laga ceyriyay xilli ciyaareedkiisii labaad, waxaana lagu baddelay Jose Mourinho muddo kooban kaddib markii FA Cup uu ka soo qaaday kooxda Crystal Palace bishii Maajo ee sanadkii 2016.
Van Gaal ayaa United ku hoggaamiyay inay ku dhammeystaan booska afraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii 2014-2015, balse waxa uu ku guuldarreystay inuu soo gaaro boosaska loogu soo baxo Champions League xilli ciyaareedkii xigay.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii la ceyriyay macallinkii hore ee xulka qaranka Netherlands, United waxay ku dhammeysatay boosaska afarta sare kaliya hal jeer, waxayna ahayd xilli ciyaareedkii labaad ee taliska Jose Mourinho, 2017-18.
Van Gaal ayaa xilka kabtanka u magacaabay Wayne Rooney xilligii uu Old Trafford ka arriminayay, ka hor inta uusan weeraryahanka reer England ka tagin Red Devils sanadkii 2017 isagoo ku biiray Everton, waxaana markaa kooxda xukumayay Jose Mourinho.
“Waan niyad jabay markii Louis la ceyriyay. Aniga ahaan, waxaan ku raaxeysanayay la shaqeyntiisa” ayuu yiri Rooney isagoo la hadlayay Sunday Mirror.
“Waxay ahayd inaan xilli ciyaareed saddexaad sii heysanno, waan xoogeysan lahayn.
“Waxaan dareemay inay wax walba hagaagayaan, ciyaartoydana waxay billaabeen inay fahmaan ujeedkiisa. Labadaas sano waxaan ku bartay in ka badan inta aan ku bartay la shaqeynta macallimiinta kale.
“Waa sababta aan waligey abaal ugu heyn doono isaga. Igama ahan inuu kabtan iga dhigay, balse waa sida uu aaminaad buuxdo ii siiyay.” ayuu hadalkiisa ku daray Wayne Rooney.
Falanqeeyeyaasha kubadda cagta ayaa ku kala aragti gaddisan go’aankii ay United ku ceyrisay Louis van Gaal, waxaana kabtankii hore ee Red Devils iyo xulka qaranka England uu rumeysan yahay in kooxdiisii hore ay ku fududaatay ceyrinta Van Gaal.